Hlaziya i-WhatsApp kwi-Android, uyifumana njani ingxelo yokugqibela (2022) yasimahla | I-Androidsis
Ukugcina usetyenziso luhlaziyiwe kuhlobo lwakutshanje kuhlala kubalulekile. Nangona kunjalo, hayi abasebenzisi abambalwa abakrokrelayo ngokuhlaziya usetyenziso ngenxa yeengxaki ezinokubakho zokusebenza. Abanye abanalo uhlaziyo lwesicelo ngenxa yokungazi, ke ngoko, siya kukufundisa yonke into ekufuneka uyazi hlaziya WhatsApp.
Ngokuqinisekileyo ungomnye wabo bafuna faka i-WhatsApp mahala nje ukuba iselfowuni intsha kraca, ke ngoko, kubalulekile ukuba nayo yakutshanje Inguqulelo ehlaziyiweyo yeWhatsApp, ayisiyiyo kuphela ngenxa yokuba siphoswa ziindaba ezibandakanyiweyo kuhlobo ngalunye, kodwa ngenxa yokuba uhlaziyo luzisa neendaba kwinqanaba lokhuseleko, kwaye imfihlo ibalulekile, ngakumbi xa sifuna ukugcina iintsholongwane kwi-Android ezinjengezo zibandakanya thina Intengiso kuWhatsApp.
1 Ungayihlaziya njani i-WhatsApp kwi-Android
2 Andikwazi ukuhlaziya i-WhatsApp
2.1 Andikwazi ukuhlaziya i-WhatsApp ngenxa yokunqongophala kwendawo
3 Uhlaziya njani i-WhatsApp yasimahla
4 Hlaziya i-WhatsApp Plus
5 Kutheni kubalulekile ukuba i-WhatsApp ihlaziywe?
6 Uyihlaziya njani iWebhu yeWhatsApp
7 Uba ngumvavanyi we-beta kwaye uvavanye ingxelo yokugqibela yeWhatsApp?
8 Ungayihlaziya njani i-WhatsApp nge-APK ngaphandle kweGoogle Play
9 Ngaba uhlaziyo oluzenzekelayo lweWhatsApp lwenziwa lwasebenza?
Ungayihlaziya njani i-WhatsApp kwi-Android
Ityala le-Android liyafana, ngokulula ngena kuGoogle Play Ivenkile sinokuyihlaziya isicelo, kuba iphepha lokuqala liza kusibonisa ukuba zeziphi izicelo ezinokuhlaziywa kwaye kulapho unokuhlaziya khona i-WhatsApp ye-Android.
Ewe kunjalo khuphela i-whatsapp ye-whatsapp kunokwenzeka kuyo nayiphi na imithombo yesiqhelo, iya kuhlaziywa ukuba siyayifaka.
Andikwazi ukuhlaziya i-WhatsApp
Zininzi izizathu zokuba kutheni singazukukwazi ukuhlaziya i-WhatsApp, kuxhomekeke kweliphi iqonga esilisebenzisayo. Kwimeko ye-Android, siza kubandakanya ezona zizathu zidumileyo zokuba sifumane impazamo yokuhlaziya i-Whastapp:
Ukuba ubona ifayile ye- ikhowudi yempazamo 413, 481, 491, 492, 921, 927 okanye 941, Yenza oku kulandelayo:
Cima iakhawunti yakho kaGoogle: yiya ku Useto > Iiakhawunti > Uphando > khetha iakhawunti yakho kwaye uyicime
Qala kabusha isixhobo sakho ukongeza iakhawunti yakho kaGoogle kwakhona.
Cima i-cache yesicelo: Useto> Usetyenziso> Ivenkile yeGoogle Play> Cima indawo yokugcina kunye nokuCoca idatha.
Andikwazi ukuhlaziya i-WhatsApp ngenxa yokunqongophala kwendawo
Ukuba ufumana impazamo 101, 498 okanye 910 yaziwa ngokuba yi "Akukho sithuba saneleyo sokugcina", Kule nyathelo lokuqala kukucoca i-cache njengoko sibonisile ngaphambili. Ukuba awukwazi, awuzukukhetha ngaphandle kokucima iifayile ezifumaneka kula macandelo alandelayo kwindawo yokugcina isixhobo:
Ifolda yevidiyo ikwi: / WhatsApp / Media / WhatsApp Iividiyo / ezithunyelweyo.
Imifanekiso eneenkcukacha ikwi: / WhatsApp / Media / WhatsApp Images / Sent.
Ifolda yemiyalezo yelizwi ikule ndawo: / WhatsApp / Media / WhatsApp Voice Notes.
Enye yeempazamo eziqhelekileyo iimpazamo zika "Ifayile yephakheji ayisebenzi ", ngenxa yoku kufuneka sikhuphele i-WhatsApp .apk ngqo kwiwebhusayithi esemthethweni yesicelo, emva koko siya kuseto lwe-Android, ukuya ku "Khuseleko" kwaye xa sele silapho, siza kwenza "Imithombo engaziwayo". Ngoku kufuneka sibuyele kwifolda yokukhuphela kwaye sifake i-WhatsApp kwakhona kuhlobo lwayo lwamva nje.
Uhlaziya njani i-WhatsApp yasimahla
Akukho ngxaki, nokuba yeyiphi na indlela oyisebenzisayo, i-WhatsApp isimahla, ungakhathazeki, vuselela i-WhatsApp yasimahla Kukwanokwenzeka, ke ungakhathazeki ngalo naluphi na uhlaziyo, inkonzo ye-WhatsApp iya kuba simahla ebomini.
Ke ngoko, siyakukhumbuza ukuba kufanele ukrokrele nawuphi na umniki-nkonzo ozama ukwenza ukuba wenze intlawulo endaweni yokufumana ubhaliso kuWhatsApp, kuba sinokuqinisekisa ukuba usetyenziso kunye nokusetyenziswa kwalo kukhululeke ngokupheleleyo, ngaphaya kwentlawulo kumsebenzisi wethu ngokutshintshiselana yesicwangciso sedatha yethu.
Hlaziya i-WhatsApp Plus
Kwimeko yohlengahlengiso kuWhatsApp, kuya kufuneka sikhuphele ifayile ye .APK yeWhatsapp Plus ukuze ndikwazi ukuyivuselela. Ke ngoko, Ukuhlaziya i-WhatsApp Plus kufuneka siye kumboneleli, khuphela kwakhona uguqulelo lwamva nje olukhoyo lwe-WhatsApp kwaye ulandele imiyalelo yonjiniyela. Kule LINK siza kufumana zonke iinguqulelo kwaye ngokuqinisekileyo uhlaziyo lwamva nje lweWhatsApp Plus, ke kuya kufuneka sikhuphele .apk kwaye siyibuyisele ngaphezulu kwe-WhatsApp Plus esele ifakiwe.
Ngaphandle kwamathandabuzo, i-WhatsApp iye yaba sisicelo sokuthumela imiyalezo kwangoko esisetyenziswa ngabantu bemihla ngemihla, ke kubalulekile ukuba ube nakho hlaziya i-whatsapp kwinguqulelo yamva nje, njengoko oku kuya kukubonelela ngokuphuculwa kokusebenza, ukusebenza okutsha kwaye kuya kusombulula iingxaki ezinokubakho zokhuseleko ezinokuthi zibeke imfihlo yakho emngciphekweni.
Kutheni kubalulekile ukuba i-WhatsApp ihlaziywe?
Rhoqo, I-WhatsApp ihlaziywa. Ukusetyenziswa kwemiyalezo emva koko kwazisa uthotho lweziphuculo, ezinje ngemisebenzi emitsha. Nangona kunokubakho ukuphuculwa kokusebenza okanye ukhuseleko. Ke ngoko, xa inguqulelo entsha enjalo ikho, kubalulekile ukuba uyihlaziye.
Kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni kubalulekile gcina iapp ihlaziyiwe. Kwelinye icala, ukufikelela kuyo yonke imisebenzi emitsha kunye nophuculo oluza kuyo. Kwimeko yokungavuseleli, ngekhe ubonwabele. Kwaye uninzi lwezinto ezintsha zikuvumela ukuba usebenzise ngcono i-WhatsApp.
Kwelinye icala, njengoko besesitshilo, ukuphuculwa kokhuseleko nako kuyaziswa. Ngale ndlela, ukuba nohlobo olutsha, uyazikhusela ngokuchasene nosongelo olunokwenzeka. Yiyo loo nto ifowuni yakho ye-Android isengozini yokuhlaselwa, intsholongwane okanye esinye isoyikiso esikhoyo ngelo xesha. Isicelo sinokuba yindlela yokungena kwifowuni yethu kolu hlobo lweemeko.
Ungayihlaziya i-WhatsApp kuGoogle Play, ukujonga iprofayili yesicelo. Unokukhangela uhlaziyo kwifowuni yakho ye-Android, kwicandelo lezicelo khangela usetyenziso kwaye unyanzele ukukhangela uhlaziyo. Nangona uninzi lohlaziyo luhlala luzenzekelayo. Ke akukho mfuneko yokuba wenze nantoni na ukuze uzifumane.
Uyihlaziya njani iWebhu yeWhatsApp
I-WhatsApp inenguqulo yayo kwikhompyuter, Tsalela umnxeba kuWhatsApp. Njengakwinguqulelo yee-smartphones, ihlaziywa ngemisebenzi emitsha. Nangona, uninzi lwabasebenzisi lusenokungayazi ukuba luhlaziya njani olu hlelo lokusebenza.
Ngokwesiqhelo, xa uhlaziyo lukhona, uza kufumana isaziso. Ke into eqhelekileyo kukuba ucofe kwikhonkco elivela kwiscreen. Ke, sele unalo ufikelelo kuhlaziyo lwale nguqulo. Kodwa, ukuba le ndlela ayisebenzi okanye awusifumenanga esi saziso, kukho enye, indlela elula kwaye ekhawulezayo yokufumana.
Kuya kufuneka ungene kwifayile ye- iphepha elilandelayo. Bhangqa ifowuni yakho kunye nayo kwaye uvule usetyenziso kwifowuni. Kwiwebhu ufumana ikhowudi yeQR, Kuya kufuneka uyifunde kunye nefowuni yakho. Oku kuyakuhlaziya iWebhu yeWhatsApp kwangoko. Ngoku ungonwabela ingxelo entsha.
Uba ngumvavanyi we-beta kwaye uvavanye ingxelo yokugqibela yeWhatsApp?
I-WhatsApp inenguqulo ye-beta, eya kukuvumela ukuba uzame yonke imisebenzi emitsha eza kuyo ngaphambi komnye umntu. Ukuba uyafuna, unokuba ngumvavanyi we-beta wesicelo. Ukwazi ukuyenza yinto elula kakhulu. Kufuneka ulandele nje amanyathelo ambalwa.
Kuqala kufuneka ufake iphepha le-WhatsApp Beta, onokufikelela kulo kwesi sixhobo. Ngaphakathi, uya kucelwa ukuba ungene kwiakhawunti yakho kaGoogle. Emva koko iya kuvela kwiscreen Iqhosha elithi "Yiba ngumvavanyi". Konke okufuneka ukwenze kukucofa kwiqhosha. Ngale ndlela, sele ungumvavanyi we-beta.
Xa ukwenzile oku, kuya kufuneka ukhuphele uhlobo lwamva nje lwesicelo. Emva koko yiya kwiVenkile yokudlala. Kulapho, kwiprofayile kaWhatsApp, uyabona ukuba sele ungumvavanyi we-beta, phantsi kwegama lesicelo. Ukulandela, hlaziya usetyenziso kwifowuni yakho I-Android. Ngala manyathelo sele ungumvavanyi we-beta kwaye uya kuba nakho ukuvavanya ezi ndaba ziza kwi-app yemiyalezo.
Ungayihlaziya njani i-WhatsApp nge-APK ngaphandle kweGoogle Play
Unokuba unayo i-WhatsApp ye-WhatsApp, oyikhuphele ngaphandle kweGoogle Play. Kuyenzeka ukuba abasebenzisi abanefowuni engaxhaswanga. Kule meko, inkqubo yokuhlaziya usetyenziso yahlukile.
Kuba asinakho ukufikelela kwifayile kuGoogle Play njengesiqhelo. Ngethamsanqa, i-WhatsApp ngokwayo iyasinceda kwinkqubo. Kwiphepha lakhe lewebhu Sinecandelo lezixhobo ze-Android, onokufikelela kuzo esi sixhobo. Kulapho unokukhuphela khona i-APK.
Sifumana i-WhatsApp ye-WhatsApp, yinguqulelo yakutshanje yeapp. Ke ngoko, khuphela ifayile kwifowuni yakho I-Android kwaye uqhubeke nokuyihlaziya ngale ndlela. Ukuba unenguqulo yakudala yenkqubo yokusebenza, ethi ngokomzekelo ingasayixhasi iGoogle Play, yeyona ndlela ilungileyo. Ngaphandle kokuba ukhuselekile.
Ngaba uhlaziyo oluzenzekelayo lweWhatsApp lwenziwa lwasebenza?
Xa ufaka i-WhatsApp kwifowuni yakho ye-Android, usetyenziso ihlala iza nohlaziyo oluzenzekelayo. Isenokungabi njalo kwimeko yakho, okanye ngexa elithile uza kuyicwangcisa ngokwahlukileyo. Uncedo lohlaziyo oluzenzekelayo kukuba akukho nto unokuyenza. Ke ngoko, ukuba ufuna ukubenza basebenze, ilula kakhulu.
Faka usetyenziso lweVenkile yokudlala kwifowuni yakho ye-Android. Emva koko, bonisa imenyu yasekhohlo kwaye ufake icandelo lokuqala, elibizwa "Izicelo zam kunye nemidlalo”. Okulandelayo, kwiithebhu eziphezulu, cofa kufakelo. Izicelo onazo kwifowuni yakho ziya kuboniswa kuluhlu.
Khangela kwaye ufake i-WhatsApp kolo luhlu. Nje ukuba ungene ngaphakathi kwiprofayili yeapp, cofa kumachaphaza amathathu athe nkqo avela ekunene phezulu kwesikrini. Xa usenza oku, iinketho ezininzi ziyavela kwiscreen. Okokugqibela kukuhlaziya okuzenzekelayo. Ukuba isikwere asinalutho, cinezela kwaye uphawu oluhlaza luya kuvela.
Ngale ndlela, unayo isebenze uhlaziyo oluzenzekelayo lweWhatsApp. Ngexesha elizayo xa iapp ihlaziya, awuzukuyenza nantoni na. Iya kuhlaziya ngokuzenzekelayo.